Linus Torvalds kubvunzana, makore makumi maviri nemaviri mushure meLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kubvunzana naLinus Torvalds, makore makumi maviri nemashanu mushure meLinux
Munguva pfupi yapfuura hurukuro zvinonakidza kwazvo naLinus Torvalds, inotungamirwa naRobert Young, pfacha pane iyo Linux Zvinyorwa peji mariri anomira panze chokwadi chekuti kekupedzisira madzishe paakataurirana, yaive chaiyo kota yezana ramakore rapfuura, muna 1994.
Chii chakashanduka mumakore makumi maviri apfuura uye chii chakaramba chakafanana? Linux ichave yakaita sei kwemakore anotevera makumi maviri nemashanu? Iyi ingori mimwe yemibvunzo yakamutswa.
Linus Torvalds akapindura mibvunzo nezvezvinangwa zvake. Nhasi kana masisitimu anoshanda akavakwa paLinux kernel ari kwese kwese.
Izvi zvinokumbira iwo mubvunzo: Ko Linux ichave yakaita sei mumakore makumi maviri anotevera? Torvalds pachake anotenda izvozvo, pamwe nekuda kwezera (anenge aine makore 75), hauchazotora chikamu pabasa pane kernel.
Torvalds, zvisinei, haana kana kukahadzika kuti vacharamba vachienderera. Akasimudza nyaya yezera revagadziri vane danda rakakura kwazvo mukusimudzira kernel.
Akavimbisa kuti avhareji yakakwira haizi mhedzisiro yekushaikwa kwevadiki mapurogiramu vanoda kushanda paLinux, asi chokwadi chekuti vanogadzira kubatanidzwa kungori mapenzi kune pfungwa yekutenderera.
Izvi zvinodaro nekuti izvo zvinotaurwa naTorvalds zvinoonekwa nekushanda pakadzika zvisingaite kwemakore makumi maviri nemashanu sekugutsikana kusingazungunuke.
1 Hapana chinhu chiri nani kupfuura C
1.1 Kusazivikanwa kwakanyanyisa, uye midhiya enhau marara.
Hapana chinhu chiri nani kupfuura C
Nezve izvo zvehunyanzvi zvinhu, yakakodzera kuteerera Mubvunzo wechidiki nezvekuti zvakarongwa kunyorazve kernel mune mimwe mitauro "yemazuva ano".
Torvalds toni inokudza isingaremekedze inobvumidzwa kune mitauro mitsva iyi, asi panguva imwe chete isiri yakaipa asi yakavimbika, inotaura kuti hapana chinhu chiri nani kupfuura mutauro weC pakati pemitauro yekuronga.
Hunhu hwebasa repakati hwakakosha. Iyo "yemazuva ano" mitauro Yakarongedzwa Hupenyu Hwako Iwe Wanga Uine Linux hazvizoshande mushe kodhi-yepazasi kodhi inoshandiswa muLinux basa.
Maonero aTorvalds anosimbiswawo kuti zvinoenderana kwaari iye kuuya kwema smart zvishandiso, zvinonzwisiswa nenzira iyo inotadzisa kufarirwa kweLinux paPC.
Iwe urikugadzira iyi pfungwa, zvichiratidza kuti kwakawanda kwaimbotarisirwa mashandiro eiyo sisitimu yekushandisa ikozvino webhurawuza.
Nekudaro, iro basa rePC semidziyo yakatorwa pamusoro nenhare mbozha mumusika wevatengi.
“Yakasimba michina yedesktop inoshandiswa nhasi kunyanya mukugadzira media, kutamba kana kugadzirisa. Nhasi desktop yakajairika ingori yebrowser nyaya uye muzviitiko zvakawanda izvi zvinogona kutsiviwa nechete tablet kana foni, "anodaro Torvalds.
Kusazivikanwa kwakanyanyisa, uye midhiya enhau marara.
Pakupedzisira, Linus Torvalds anotenda kuti vezvenhau vezvenhau ndiko kukurisa kukuru muzera remidziyo.
Akavaenzanisa nemaemail, idzi inzira dzisingaenzanisike dziri nani dzekutaurirana pane zvakaenzanisirwa manzwiro akasimba akavakirwa simba reFacebook kana Twitter.
Pane iwo mawebhusaiti ari evazhinji nhasi, nzira chete yekushandisa iyo Internet, zvinoenderana naTorvalds:
Iyi yese yekugovana-yakavakirwa modhi marara. Iko hakuna kuyedza pano, hapana mhando yekudzora. Chaizvoizvo zvese izvi zvakagadzirirwa regedza kudzora kwemhando, chinangwa chekuwana iyo yakaderera dhinomineta, batobhaiti, nekusimudzira zvinhu zvakagadzirwa kuti zviite kupokana, kazhinji kutsamwa.
Torvalds inomutsawo nyaya yekuvanzika paWebhu, iyo, sezvaunogona kuwana fungidziro nguva pfupi yadarika, iri kutanga zvakare kududzirwa nevapi vakuru vevashandi sevheji yekutengesa.
Izvo Linus anotenda kuti kusazivikanwa kwakanyanyisa uye kunogara kuchikanganiswa neyakavanzika.
Chaizvoizvo, ini ndiri mumwe wevanhu ivavo vanofunga kuti kusazivikanwa kwakanyanyisa. Vamwe vanhu vanovhiringidza kuvanzika uye kusazivikanwa uye vanofunga kuti zvinofambidzana, uye kuti kuchengetedza zvakavanzika zvinoreva kuti unofanirwa kudzivirira kusazivikanwa.
Ndinofunga izvozvo hazvina kunaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubvunzana naLinus Torvalds, makore makumi maviri nemashanu mushure meLinux
Ubuntu MATE 18.04.2 LTS uye 19.04 Beta inowanikwa yeGPD Pocket uye GPD Pocket 2 makomputa
HPLIP ikozvino inowirirana neLinux Mint 19.1 uye Debian 9.7